ဘဝမှာ အောင်မြင်စေဖို့အတွက် ကိုယ်နေကိုယ်ထား လမ်းညွှန်ချက်များ – Gentleman Magazine
ဘဝမှာ အောင်မြင်စေဖို့အတွက် ကိုယ်နေကိုယ်ထား လမ်းညွှန်ချက်များ
သင်ဟာ စာရေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် လူတွေနဲ့ ကောင်းကောင်းဆက်သွယ်တတ်ရပါမယ်။ လူနှစ်ယောက်အကြားမှာ စကားလုံးတွေမပါပဲ ၉၃ ရာနှုန်း ဆက်သွယ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် စကားလုံးတွေထက်စာရင် လေသံနဲ့ ကိုယ်နေဟန်ထားကို ဂရုပြုရပါမယ်။
အောက်မှာက ခန္ဓာဗေဒဘာသာစကားကို ပိုပြီးနားလည်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ အချက် ၁၁ ချက် ချပေးထားပါတယ်။
၁. တစ်ဖက်လူရဲ့အမူအရာကို လိုက်တုပါ
အကုန်လုံးတစ်ထေရာထဲ လိုက်တုနေဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ သူလက်ပိုက်ရင် လက်လိုက်ပိုက်ပါ။ သင့်ကိုကြည့်ရင် ပြန်ကြည့်ပါ။ စကား ဖြည်းဖြည်းပြောရင် ဖြည်းဖြည်းလိုက်ပြောပါ။ အဲဒါဟာ သင်တို့နှစ်ယောက်ကို ပိုပြီး ဆက်သွယ်နိုင်သလို ခံစားရစေပါတယ်။ နေရာတိုင်းမှာ သုံးလို့ရပေမယ့် Date လုပ်တာတွေ၊ စီးပွားရေးကိစ္စတွေ့ဆုံတာတွေ၊ လူသစ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံတာတွေမှာ ပိုပြီး အကျိုးရှိပါတယ်။
၂. ကိုယ်ကို ကာမထားပါနဲ့
လူအုပ်ရှေ့ကို ဖြတ်လျှောက်ရတဲ့အခါ၊ မိန်းမချောတစ်ဦးဆီ လာရတဲ့အခါတွေမျိုးမှာ ကိုယ့်ဘာသာတောင် မသိလိုက်ပဲ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကို လက်မောင်းနဲ့ ကွယ်ထားမိတတ်ပါတယ်။ အဲဒိလိုဖြစ်တာဟာ ကိုယ့်ဘာသာ စိတ်မချတဲ့ပုံ ပေါက်ပါတယ်။ အဲဒိလို မလုပ်မိအောင် ဂရုစိုက်ပြီး ထိန်းထားပါ။
၃. Power Pose လုပ်ပါ
Power Pose ဆိုတာ ခေါင်းကို မတ်နေအောင်ထားပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို အပေါ်ကနေ V ပုံစံ မြှောက်ထားတာပါ။ အဲဒိပုံစံဟာ တက်စတိုစတီရုန်းဟော်မုန်း ထွက်ရှိမှုကို တိုးပွားစေပါတယ်။ အစည်းအဝေးမသွားခင်၊ ရည်းစားနဲ့ ချိန်းထားတာ မသွားခင် အဲဒါမျိုး လုပ်ပေးပါ။
၄. ခြေထောက်တွေကို လိမ်မထားပါနဲ့
ခြေလိမ်ထားတာဟာ သင်ကပြောနေတာတွေကို နားမထောင်ဘူး ညှိနှိုင်းမရဘူးဆိုတဲ့ ပုံစံ ပေါက်စေပါတယ်။ ပိုက်ဆံလာချေးသူနဲ့ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေနိုင်ပေမယ့် သင့် Boss နဲ့ဆိုရင်တော့ ခြေခေါက်ခွဲပီး မတ်မတ်နေတာက ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။
၅. တကယ်ဆက်သွယ်ဖို့ ရယ်ပါ
ပျော်နေတဲ့ ရယ်နေတဲ့ မျက်နှာထက် ပိုကောင်းတာမရှိပါဘူး။ ရယ်တယ်ဆိုတာ လူနှစ်ယောက်ကြား အဆုံးမဲ့ ဆက်သွယ်သွားမှ ရယ်ဖြစ်တာပါ။ Date လုပ်နေတုန်း ရယ်ရင်လဲ သင့်ကိုပိုပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိစေပါတယ်။ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ဟာသလေးပြောလိုက်တာဟာ သင့်ရဲ့ Boss လောင်းကို ပိုပြီးသဘောကျသွားစေပါတယ်။
လက်ပိုက်ထားတယ်ဆိုတာလဲ ခြေလိမ်ထားသလို ခုခံတာကို ပြတာပါ။ လက်ပိုက်လိုက်ရင် သင်နဲ့စကားပြောနေသူနဲ့ သင့်ကို ပိုပြီးဝေးကွာသွားစေပါတယ်။ လူတစ်ယောက်နဲ့ မြန်မြန်ဆက်သွယ်ချင်ရင် လက်ပိုက်ဖြုတ်လိုက်ပါ။
ခေါင်းမော့တယ်ဆိုတာ လွှမ်းမိုးမှု ကိုယ့်ဘာသာ ယုံကြည်မှုနဲ့ ဂုဏ်ယူမှုကို ပြတာပါ။ ခေါင်းမော့ထားခြင်းဖြင့် ဘယ်သူနဲ့ပဲစကားပြောပြော ကိုယ့်ဘာသာ ယုံကြည်မှု မြင့်မားစေပါတယ်။ နောက်တစ်ခေါက် အစည်းအဝေးလို လူတွေကြားထဲ စကားပြောရမယ်ဆို ခေါင်းမော့ထားလိုက်ပါ။
၈. လက်တွေကို မြှောက်မြှောက်ပြီးစကားပြောပါ
လက်ဟန်နဲ့ ပြောနေတုန်း လက်မြှောက်ပြီးစကားပြောခြင်းက သင့်ကို ယုံကြည်ရတဲ့ ပုံစံ ပေါက်စေပါတယ်။ အဲဒါဟာ သင်ပြောနေတဲ့သူဆီက သင် ဘာမှ ဖုန်းကွယ်မထားဘူးဆိုတာ ပြတာပါ။ အမြဲ မြှောက်ထားဖို့ မလိုပါဘူး။ အဲဒါဟာ အရောင်းသမားတွေ၊ တစ်ယောက်ယောက်ကို ဖျောင်းဖျဖို့ ကြိုးစားတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ အထောက်အကူ ပြုပါတယ်။
သင့်ကို စကားပြောနေသူနဲ့ ဆက်သွယ်ချင်ရင် သူ အသစ်တစ်ခုပြောလိုက်တိုင်း ခေါင်းငြိမ့်ပြပါ။ အဲဒါဟာ သူတို့ကို သဘောတူတယ်ဆိုတာနဲ့ သင် သူပြောတာကို စိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါ။ နောက်တစ်ခေါက် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ခင်ပွန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် စကားပြောရင် ခေါင်းငြိမ့်ပြောပါ။
၁၀. ခြေထောက်ကို မနှံ့ပါနဲ့
အဲဒါဟာ သင့်ကို ပျင်းနေတဲ့ပုံ ပေါက်စေပါတယ်။ ထမင်းဆိုင်မှာ အော်ဒါစောင့်နေတုန်း ဆို အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင့်မန်နေဂျာက အရေးကြီးတစ်ခုခု ပြောနေတုန်း သွား ခြေထောက်နှံ့မိရင်တော့ ကွိုင်တက်ပါပြီ။ သင်က ခြေမနှံ့ပဲ စိတ်ဝင်တစားနားထောင်ပေးရင် နောက်တစ်ခါ ရာထူးတိုးစာရင်းမှာ သင်ပုလာမှာ အသေအချာပါ။
၁၁. လက်မောင်းကို တို့တို့ပြီး စကားပြောပါ
ပုံပြောနေတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဟာသပြောတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လက်မောင်းကို တို့တို့ပြီးပြောတာဟာ သင့်ကို ယုံကြည်မှု ရစေပါတယ်။ အမြဲတမ်းတော့ လူတွေကို တို့နေလို့ အဆင်မပြေပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ပခုံးပုတ်ရမယ့် လက်မောင်းပုတ်ရမယ့် သူတွေ ရှိမှာပါ။ အဲဒိလိုလုပ်ခြင်းဟာဖြင့် သင်နဲ့ စကားပြောနေတဲ့သူနဲ့ စိတ်ခြင်းပါ ဆက်သွယ်မိစေပါတယ်။
သင်ဟာ စကားကောင်းကောင်းမပြောတတ်ပေမယ့် ခန္ဓာဗေဒဘာသာစကားကို ကောင်းကောင်း အသုံးချတတ်ရင် အကောင်းဆုံးဆက်သွယ်နိုင်သူ ဖြစ်လာမှာပါ။ ဘဝမှာ အရေးကြီးဆုံးက ဆက်သွယ်ရေးပါ။ ဆက်သွယ်ရင် အရေးကြီးဆုံးက ခန္ဓာဗေဒ ကိုယ်ဟန်လက်ဟန် ဘာသာစကားပါပဲ။
ဘဝမှာ အောငျမွငျစဖေို့အတှကျ ကိုယျနကေိုယျထား လမျးညှနျခကျြမြား
သငျဟာ စာရေးလေးပဲဖွဈဖွဈ လုပျငနျးရှငျတဈယောကျပဲဖွဈဖွဈ ဘဝမှာအောငျမွငျဖို့အတှကျဆိုရငျ လူတှနေဲ့ ကောငျးကောငျးဆကျသှယျတတျရပါမယျ။ လူနှဈယောကျအကွားမှာ စကားလုံးတှမေပါပဲ ၉၃ ရာနှုနျး ဆကျသှယျပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ စကားလုံးတှထေကျစာရငျ လသေံနဲ့ ကိုယျနဟေနျထားကို ဂရုပွုရပါမယျ။
အောကျမှာက ခန်ဓာဗဒေဘာသာစကားကို ပိုပွီးနားလညျအသုံးပွုနိုငျဖို့ အခကျြ ၁၁ ခကျြ ခပြေးထားပါတယျ။
၁. တဈဖကျလူရဲ့အမူအရာကို လိုကျတုပါ
အကုနျလုံးတဈထရောထဲ လိုကျတုနဖေို့မဟုတျပါဘူး။ သူလကျပိုကျရငျ လကျလိုကျပိုကျပါ။ သငျ့ကိုကွညျ့ရငျ ပွနျကွညျ့ပါ။ စကား ဖွညျးဖွညျးပွောရငျ ဖွညျးဖွညျးလိုကျပွောပါ။ အဲဒါဟာ သငျတို့နှဈယောကျကို ပိုပွီး ဆကျသှယျနိုငျသလို ခံစားရစပေါတယျ။ နရောတိုငျးမှာ သုံးလို့ရပမေယျ့ Date လုပျတာတှေ၊ စီးပှားရေးကိစ်စတှဆေုံ့တာတှေ၊ လူသဈတှနေဲ့ တှဆေုံ့တာတှမှော ပိုပွီး အကြိုးရှိပါတယျ။
၂. ကိုယျကို ကာမထားပါနဲ့
လူအုပျရှကေို့ ဖွတျလြှောကျရတဲ့အခါ၊ မိနျးမခြောတဈဦးဆီ လာရတဲ့အခါတှမြေိုးမှာ ကိုယျ့ဘာသာတောငျ မသိလိုကျပဲ ကိုယျ့ခန်ဓာကိုယျကို လကျမောငျးနဲ့ ကှယျထားမိတတျပါတယျ။ အဲဒိလိုဖွဈတာဟာ ကိုယျ့ဘာသာ စိတျမခတြဲ့ပုံ ပေါကျပါတယျ။ အဲဒိလို မလုပျမိအောငျ ဂရုစိုကျပွီး ထိနျးထားပါ။
၃. Power Pose လုပျပါ
Power Pose ဆိုတာ ခေါငျးကို မတျနအေောငျထားပွီး လကျနှဈဖကျကို အပျေါကနေ V ပုံစံ မွှောကျထားတာပါ။ အဲဒိပုံစံဟာ တကျစတိုစတီရုနျးဟျောမုနျး ထှကျရှိမှုကို တိုးပှားစပေါတယျ။ အစညျးအဝေးမသှားခငျ၊ ရညျးစားနဲ့ ခြိနျးထားတာ မသှားခငျ အဲဒါမြိုး လုပျပေးပါ။
၄. ခွထေောကျတှကေို လိမျမထားပါနဲ့
ခွလေိမျထားတာဟာ သငျကပွောနတောတှကေို နားမထောငျဘူး ညှိနှိုငျးမရဘူးဆိုတဲ့ ပုံစံ ပေါကျစပေါတယျ။ ပိုကျဆံလာခြေးသူနဲ့ဆိုရငျတော့ အဆငျပွနေိုငျပမေယျ့ သငျ့ Boss နဲ့ဆိုရငျတော့ ခွခေေါကျခှဲပီး မတျမတျနတောက ပိုကောငျးပါလိမျ့မယျ။
၅. တကယျဆကျသှယျဖို့ ရယျပါ
ပြျောနတေဲ့ ရယျနတေဲ့ မကျြနှာထကျ ပိုကောငျးတာမရှိပါဘူး။ ရယျတယျဆိုတာ လူနှဈယောကျကွား အဆုံးမဲ့ ဆကျသှယျသှားမှ ရယျဖွဈတာပါ။ Date လုပျနတေုနျး ရယျရငျလဲ သငျ့ကိုပိုပွီး ဆှဲဆောငျမှု ရှိစပေါတယျ။ အငျတာဗြူးတဈခုမှာ ဟာသလေးပွောလိုကျတာဟာ သငျ့ရဲ့ Boss လောငျးကို ပိုပွီးသဘောကသြှားစပေါတယျ။
လကျပိုကျထားတယျဆိုတာလဲ ခွလေိမျထားသလို ခုခံတာကို ပွတာပါ။ လကျပိုကျလိုကျရငျ သငျနဲ့စကားပွောနသေူနဲ့ သငျ့ကို ပိုပွီးဝေးကှာသှားစပေါတယျ။ လူတဈယောကျနဲ့ မွနျမွနျဆကျသှယျခငျြရငျ လကျပိုကျဖွုတျလိုကျပါ။
ခေါငျးမော့တယျဆိုတာ လှမျးမိုးမှု ကိုယျ့ဘာသာ ယုံကွညျမှုနဲ့ ဂုဏျယူမှုကို ပွတာပါ။ ခေါငျးမော့ထားခွငျးဖွငျ့ ဘယျသူနဲ့ပဲစကားပွောပွော ကိုယျ့ဘာသာ ယုံကွညျမှု မွငျ့မားစပေါတယျ။ နောကျတဈခေါကျ အစညျးအဝေးလို လူတှကွေားထဲ စကားပွောရမယျဆို ခေါငျးမော့ထားလိုကျပါ။
၈. လကျတှကေို မွှောကျမွှောကျပွီးစကားပွောပါ
လကျဟနျနဲ့ ပွောနတေုနျး လကျမွှောကျပွီးစကားပွောခွငျးက သငျ့ကို ယုံကွညျရတဲ့ ပုံစံ ပေါကျစပေါတယျ။ အဲဒါဟာ သငျပွောနတေဲ့သူဆီက သငျ ဘာမှ ဖုနျးကှယျမထားဘူးဆိုတာ ပွတာပါ။ အမွဲ မွှောကျထားဖို့ မလိုပါဘူး။ အဲဒါဟာ အရောငျးသမားတှေ၊ တဈယောကျယောကျကို ဖြောငျးဖဖြို့ ကွိုးစားတဲ့ အခါမြိုးတှမှော အထောကျအကူ ပွုပါတယျ။
သငျ့ကို စကားပွောနသေူနဲ့ ဆကျသှယျခငျြရငျ သူ အသဈတဈခုပွောလိုကျတိုငျး ခေါငျးငွိမျ့ပွပါ။ အဲဒါဟာ သူတို့ကို သဘောတူတယျဆိုတာနဲ့ သငျ သူပွောတာကို စိတျဝငျတစားနားထောငျနပေါတယျဆိုတဲ့ သဘောပါ။ နောကျတဈခေါကျ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ဖွဈဖွဈ ခငျပှနျးနဲ့ပဲဖွဈဖွဈ စကားပွောရငျ ခေါငျးငွိမျ့ပွောပါ။
၁၀. ခွထေောကျကို မနှံ့ပါနဲ့
အဲဒါဟာ သငျ့ကို ပငျြးနတေဲ့ပုံ ပေါကျစပေါတယျ။ ထမငျးဆိုငျမှာ အျောဒါစောငျ့နတေုနျး ဆို အဆနျးမဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သငျ့မနျနဂြောက အရေးကွီးတဈခုခု ပွောနတေုနျး သှား ခွထေောကျနှံ့မိရငျတော့ ကှိုငျတကျပါပွီ။ သငျက ခွမေနှံ့ပဲ စိတျဝငျတစားနားထောငျပေးရငျ နောကျတဈခါ ရာထူးတိုးစာရငျးမှာ သငျပုလာမှာ အသအေခြာပါ။
၁၁. လကျမောငျးကို တို့တို့ပွီး စကားပွောပါ
ပုံပွောနတောပဲဖွဈဖွဈ ဟာသပွောတာပဲ ဖွဈဖွဈ လကျမောငျးကို တို့တို့ပွီးပွောတာဟာ သငျ့ကို ယုံကွညျမှု ရစပေါတယျ။ အမွဲတမျးတော့ လူတှကေို တို့နလေို့ အဆငျမပွပေါဘူး။ တဈခါတဈလမှော ပခုံးပုတျရမယျ့ လကျမောငျးပုတျရမယျ့ သူတှေ ရှိမှာပါ။ အဲဒိလိုလုပျခွငျးဟာဖွငျ့ သငျနဲ့ စကားပွောနတေဲ့သူနဲ့ စိတျခွငျးပါ ဆကျသှယျမိစပေါတယျ။
သငျဟာ စကားကောငျးကောငျးမပွောတတျပမေယျ့ ခန်ဓာဗဒေဘာသာစကားကို ကောငျးကောငျး အသုံးခတြတျရငျ အကောငျးဆုံးဆကျသှယျနိုငျသူ ဖွဈလာမှာပါ။ ဘဝမှာ အရေးကွီးဆုံးက ဆကျသှယျရေးပါ။ ဆကျသှယျရငျ အရေးကွီးဆုံးက ခန်ဓာဗဒေ ကိုယျဟနျလကျဟနျ ဘာသာစကားပါပဲ။
Previous: ခံတွင်းနံ့ဆိုးခြင်းကို သက်သာပျောက်ကင်းစေဖို့
Next: လိင်ဆက်ဆံဖို့ ခက်ခဲနေပါသလား